“Waxaa jirta sabab aan ku aaminno inaan naqaan cidda weerarka fulisay” ayuu Trump ku yiri qoraal uu barta twitter-ka soo dhigay Axaddii.
Trump ayaa sheegay inuu Sacuudiga ka sugayo inuu ka maqlo cidda ay rumeysan yihiin inay ka dambeyso weerarka iyo nooca tallaabada ay ku xijin doonaan.
Goor sii horreysay, xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa twitter-ka soo dhigay “Iran waxay iminka weerar aan caadi ahayn ku qaadday halka tamarta looga qeybinayo dunida”, isaga oo diiday sheegashada kooxda Xuutiyiinta ee weerarka.
Iran ayaa eedeymaha ku saabsan inay weerarka ka dambeyso ugu yeertay “been midda ugu weyn.”
Goobaha ay suurta-galka tahay in Sacuudiga iyo Mareykanka ay beegsadaan ee Iran “ayaa noqon kara xarumaha muhiimka ah ee shidaalka dalkaas lagu sifeeyo” waxaa sidaas VOA u sheegay Ali Shihabi oo ah aas-aasaha hay’adda Arabia Foundation.